ဆယ်ကျော်သက်အဆိုတော် Billie Eilish ဂရမ်မီဆုကြီး လေးဆုရရှိ
၂၇ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၀
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပတဲ့ ၆၂ ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲမှာ ဆယ်ကျော်သက်အဆိုတော် Billie Eilish က ထိပ်တန်းဆုကြီး ၄ ခုလုံးကို ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ Grammy ဆုသမိုင်းမှာ ခုလို ဆုကြီး ၄ ခုလုံးကို တယောက်ထဲရတဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီး အဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတေး Album ဆု၊ တေး Album ထဲက အကောင်းဆုံး သီချင်းဆု၊ အကောင်းဆုံး သီချင်းဆုနဲ့ အကောင်းဆုံး အနုပညာရှင်သစ်ဆု တွေကို Billie Eilish ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုဆုကြီး ၄ ခုလုံးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၉ နှစ်တုန်းက ပထမဆုံးရခဲ့သူက အဆိုတော် Christopher Cross ဖြစ်ပါတယ်။
Billie Eilish နဲ့သူ့အကိုတို့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ဆိုတဲ့ ပထမဆုံး Billie Eilish ရဲ့ Album က အကောင်းဆုံးတေး Album ဆုကို ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Album ထဲက "Bad Guy" ဆိုတဲ့သီချင်းကလည်း တေး Album ထဲက အကောင်းဆုံး သီချင်းဆု၊ အကောင်းဆုံး သီချင်းဆုတို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားက Kpop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS ကလည်း အမေရိကန် ဆုပေးပွဲတွေထဲမှာ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ Kpop အဖွဲ့အနေနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဂီတဘက်မှာ ထူးချွန်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုဆုပေးတဲ့ Grammy ဆုပေးပွဲမှာ မနေ့ကတော့ အနုပညာရှင်တော်တော်များများက ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံးသွားတဲ့ Basketball အကျော်အမော် Kobe Bryant အတွက် ဝမ်းနည်းစကားတွေ ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်ဂီတလောကမှာ အငြင်းပွားစရာကိစ္စဖြစ်နေချိန်မှာ Grammy ဆုပေးပွဲကို ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Recording Academy က ပထမဆုံး CEO အဖြစ် Deborah Dugan ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး သီတင်း ၂ ပတ်တောင် မကြာခင်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ညံ့ဖျင်းတယ်ဆိုပြီး တာဝန်ကနေ ယာယီရပ်ဆဲခံရပါတယ်။ Deborah Dugan ကတော့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ အမျိုးသားတွေကြီးစိုးနေပြီး အမျိုးသမီးတွေကို နှိမ်ချဆက်ဆံတယ်လို့ တန်းတူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Pop ဂီတအမျိုးအစား တဦးထဲဖျော်ဖြေသူတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ "Truth Hurts" ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ အဆိုတော် Lizzo ကရရှိသွားပါတယ်။ Pop ဂီတအမျိုးအစား အဖွဲ့လိုက် ဒါမှမဟုတ် ၂ ယောက်ပေါင်း ဖျော်ဖြေသူတွေထဲက Lil Nas X နဲ့ Billy Ray Cyrus တို့ကလည်း "Old Town Road" ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ အကောင်းဆုံးဆုကို ရရှိသွားကြပါတယ်။
ဆယျကြျောသကျအဆိုတျော Billie Eilish ဂရမျမီဆုကွီး လေးဆုရရှိ
အမရေိကနျပွညျထောငျစု Los Angeles မွို့မှာ တနင်ျဂနှနေကေ့ ကငျြးပတဲ့ ၆၂ ကွိမျမွောကျ Grammy ဆုပေးပှဲမှာ ဆယျကြျောသကျအဆိုတျော Billie Eilish က ထိပျတနျးဆုကွီး ၄ ခုလုံးကို ဆှတျခူးသှားပါတယျ။ Grammy ဆုသမိုငျးမှာ ခုလို ဆုကွီး ၄ ခုလုံးကို တယောကျထဲရတဲ့ ပထမဆုံးအမြိုးသမီး အဆိုတျောဖွဈပါတယျ။ အကောငျးဆုံးတေး Album ဆု၊ တေး Album ထဲက အကောငျးဆုံး သီခငျြးဆု၊ အကောငျးဆုံး သီခငျြးဆုနဲ့ အကောငျးဆုံး အနုပညာရှငျသဈဆု တှကေို Billie Eilish ရရှိသှားတာဖွဈပါတယျ။ ခုလိုဆုကွီး ၄ ခုလုံးကို လှနျခဲ့တဲ့ ၃၉ နှဈတုနျးက ပထမဆုံးရခဲ့သူက အဆိုတျော Christopher Cross ဖွဈပါတယျ။
Billie Eilish နဲ့သူ့အကိုတို့ အိပျခနျးထဲမှာ ဖနျတီးခဲ့တဲ့ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ဆိုတဲ့ ပထမဆုံး Billie Eilish ရဲ့ Album က အကောငျးဆုံးတေး Album ဆုကို ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Album ထဲက "Bad Guy" ဆိုတဲ့သီခငျြးကလညျး တေး Album ထဲက အကောငျးဆုံး သီခငျြးဆု၊ အကောငျးဆုံး သီခငျြးဆုတို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ကိုရီးယားက Kpop အဖှဲ့ဖွဈတဲ့ BTS ကလညျး အမရေိကနျ ဆုပေးပှဲတှထေဲမှာ ပထမဆုံးဖြျောဖွခှေငျ့ရတဲ့ Kpop အဖှဲ့အနနေဲ့ သီဆိုဖြျောဖွသှေားခဲ့ကွပါတယျ။
ဂီတဘကျမှာ ထူးခြှနျသူတှကေို ဂုဏျပွုဆုပေးတဲ့ Grammy ဆုပေးပှဲမှာ မနကေ့တော့ အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားက ရဟတျယာဉျပကျြကြ သဆေုံးသှားတဲ့ Basketball အကြျောအမျော Kobe Bryant အတှကျ ဝမျးနညျးစကားတှေ ပွောကွားခဲ့ကွပါတယျ။ အမရေိကနျဂီတလောကမှာ အငွငျးပှားစရာကိစ်စဖွဈနခြေိနျမှာ Grammy ဆုပေးပှဲကို ကငျြးပတာလညျးဖွဈပါတယျ။
Recording Academy က ပထမဆုံး CEO အဖွဈ Deborah Dugan ကို ခနျ့အပျခဲ့ပွီး သီတငျး ၂ ပတျတောငျ မကွာခငျမှာ အုပျခြုပျရေးပိုငျး ညံ့ဖငျြးတယျဆိုပွီး တာဝနျကနေ ယာယီရပျဆဲခံရပါတယျ။ Deborah Dugan ကတော့ အလုပျခှငျထဲမှာ အမြိုးသားတှကွေီးစိုးနပွေီး အမြိုးသမီးတှကေို နှိမျခဆြကျဆံတယျလို့ တနျးတူအခှငျ့အရေးကျောမရှငျကို တိုငျကွားထားတာဖွဈပါတယျ။
Pop ဂီတအမြိုးအစား တဦးထဲဖြျောဖွသေူတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးဆုကိုတော့ "Truth Hurts" ဆိုတဲ့သီခငျြးနဲ့ အဆိုတျော Lizzo ကရရှိသှားပါတယျ။ Pop ဂီတအမြိုးအစား အဖှဲ့လိုကျ ဒါမှမဟုတျ ၂ ယောကျပေါငျး ဖြျောဖွသေူတှထေဲက Lil Nas X နဲ့ Billy Ray Cyrus တို့ကလညျး "Old Town Road" ဆိုတဲ့သီခငျြးနဲ့ အကောငျးဆုံးဆုကို ရရှိသှားကွပါတယျ။
ဒီနှစ် Grammy ဆုပေးပွဲ အမျိုးသမီးတွေ ရှေ့တန်းရောက်
အမျိုးသမီးရေးအားမာန်တက်စေတဲ့ I am Woman အဆိုတော် Helen Reddy
၂၀၁၆ Grammy တေးဂီတဆု ချီးမြင့်
အမေရိကန် ဂရမ်မီဆုအတွက် Eminem တစ်ပြေး
အဆိုတော် Whitney Houston ကွယ်လွန်